Retail + Search Local = Wishpond | Martech Zone
Monday, July 11, 2011 Wednesday, November 30, 2011 Douglas Karr
O doro anya na ecommerce na-enwe nnukwu mmetụta na mkpọsa… mana n'agbanyeghị otu nnukwu nyocha gị si dị, ọ gaghị edochi ịga ije na ntanetị ma na-emetụ ngwaahịa ahụ. Mbupu n'efu agaghị abụ ihe nnọchi maka ịpụ n'ụlọ ahịa na ihe ịchọrọ ugbu a. Naanị ụnyaahụ, azụrụ m juicer si Bed Bath na Beyond. M na-agụ a ton online banyere ha na ọbụna na-awa a ego na otu nke saịtị… ma m chọrọ ịla n'ụlọ na-eme ka m mbụ iko veggie ihe ọ juiceụ juiceụ na n'ehihie… adịghị etinye ya otu izu.
Ọchịchọ na-atụ anya ịbụ onye dị n'etiti usoro mkpọsa na ntanetị, na-enye ụwa kachasị mma. Nke a nwere ike ịbụ ohere dị egwu maka ndị na-ere ahịa ndị hụrụ mkpọtụ ahịa iji nweta nlebara anya n'ịntanetị ha kwesịrị.
Site Wishpond saịtị:
Wishpond hụrụ ngwaahịa ịchọrọ site na ụlọ ahịa dị gị nso. Wishpond's local shopping engine na-enyocha ụlọ ahịa ndị dị nso na maapụ ahịa kachasị mma n'obodo. Enweghị nnyefe ọzọ echere, enweghị ụgwọ mbupu ọzọ. Nweta ihe ị chọrọ taa.
Na-emekọ n’akpa gị, ebe ọ bụla ị gara. Anyị iPhone ngwa gbatịrị mpaghara gị ike ịzụ ahịa ike. Nweta ngwa a iji soro azụmahịa n'akụkụ ebe ị kwụ, ma ị na-azụ ahịa na windo n'okporo ámá ma ọ bụ na-eme nchọgharị na nkasi obi nke ụlọ
Rịọ arịrịọ mmụọ: nweta ego ị ga-ahụ n'anya. Chọrọ na ọchụchọ ngwaahịa mpaghara ahụ nwere ike ịrụ ọrụ maka gị? Mee Ihe ịchọrọ na ngwaahịa ịchọrọ, Wishpond ga-emekwa ka ị mata mgbe ọnụahịa ahụ dara, chọta ngwaahịa ndị yiri ya ga-adaba na ọnụahịa ịchọrọ ma zipụ azụmahịa nke ahaziri site na ụlọ ahịa ndị dị nso ga-adaba na ọnụahịa ahụ.
The Wishpond ahịa Center na-enye ndị na-ere ahịa obodo ikike ịkwalite ngwaahịa na azụmahịa ha ngwa ngwa, na-enye ndị na-azụ ahịa nhọrọ dị mma nke ụlọ ahịa mpaghara ịhọrọ.
Nke a bụ obere vidiyo nke ọrụ ahụ:
Ma ọ bụrụ na ị nwere obi abụọ ọ bụla na mkpọsa ahụ na-agbanwe, nke a bụ ụfọdụ nnukwu stats sitere na Wishpond na infographic nke na-akọwa ebe ha nyere aka.
Jul 12, 2011 na 5:56 PM
Daalụ maka dee elu!